Wafdi ka socda dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo saaka ku soo wajahan Muqdisho – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Wafdi ka socda dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo saaka ku soo wajahan Muqdisho
By Ciise Cabdi Ciise on 17/10/2018 No Comment
Arbaco, October, 17, 2018(HNN) Warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka helnay ilo kala duwan ayaa xaqiijinaya in wafdi ka socda dowladaha Itoobiya iyo Eritrea ay saaka ku soo wajahan yihiin magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Diyaar garow lagu soo dhoweynayo wafdigan ayaa saaka ka socda garoonka diyaaradaha Muqdisho, iyadoo la xiray qeybo ka mid ah waddooyinka waa weyn ee magaalada.
Illaa iyo hadda si rasmi ah looma shaacin cida hoggaamineysa wafdigan, hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in Wasiirada Arrimaha Dibadda Itoobiya iyo Eritrea oo isla socda ay saaka imaanayaan magaalada Muqdisho.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in wafdiga Wasiirada Arrimaha Dibadda Itoobiya iyo Eritrea ay horudhac u yihiin Madaxda wadamadooda oo la sheegayo inay Muqdisho imaan doonaan.
Tan iyo xalay waxaa aad loo hadal hayay in wafdi heer sare ay maanta oo Arbaco ah ku imaanayaan magaalada Muqdisho, hase yeeshee waxaa la qariyay cida ay yihiin wafdigan.
Is bedelada ka dhacay Gobolka Geeska Afrika ayaa sababy inuu caadi ku soo laabto xiriirka dalal colaado u dhaxeeyay, sida Itoobiya iyo Eritrea, halka ay weli socdaan dib u heshiisiinta dalalka jabuuti iyo Eritrea oo Madaxdooda ay bishii hore ku kulmeen magaalada Jeddah ee dalka Sucuudi Carabiya
Wafdi ka socda dowladaha Itoobiya iyo Eritrea oo saaka ku soo wajahan Muqdisho added by Ciise Cabdi Ciise on 17/10/2018